Banyere saịtị a
Ndewo adblock onye…
O yiri ka ị na-efu obere ...
Akwukwo mgbanwe nke Russia
Isi okwu mgbanwe nke Russia #1
Isi okwu mgbanwe nke Russia #2
Isi okwu mgbanwe nke Russia #3
Isi okwu mgbanwe nke Russia #4
Isi okwu mgbanwe nke Russia #5
Isi okwu mgbanwe nke Russia #6
Isi okwu mgbanwe nke Russia #7
Nchịkọta mgbanwe mgbanwe Russian
Akwụkwọ nyocha nke mgbanwe nke Russia
Ajụjụ Russia nke Russia banyere ajụjụ
Eserese nke Russia Rere
Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme nke mgbanwe Russia
Ntughari mgbanwe nke Russia
Nchịkwa ncheta mgbanwe nke mgbanwe nke Russia - ihe omume 1907-1916
Ntugharị ncheta mgbanwe nke mgbanwe nke Russia - ihe omume 1917
Nchịkwa ncheta mgbanwe nke mgbanwe nke Russia - ihe omume 1918-1924
Ntughari ncheta ndi mmadu nke ndi Russia
Ntughari ncheta nke ndi Russia - tsarist
Ntughari ncheta ihe ndi mmadu na Russia.
Ihe banyere ncheta mgbanwe nke Russia.
Nchịkwa ncheta mgbanwe nke mgbanwe nke Russia: ihe omume 1906 na 1913
Nchịkwa ncheta mgbanwe nke mgbanwe nke Russia: ihe omume 1914 na 1916
Ntugharị ncheta mgbanwe nke mgbanwe nke Russia: ihe omume na 1905
Ntugharị ncheta mgbanwe nke Russia: echiche
Ntughari ncheta ochichi nke Russia
Ntughari mgbanwe Russia #1
Ntughari mgbanwe Russia #2
Ntughari mgbanwe Russia #3
Ntughari mgbanwe Russia #4
Ntughari mgbanwe Russia #5
Ntughari mgbanwe Russia #6
Ntughari ochichi Russia
Ntughari okwu mgbanwe nke Russia
Ntughari mgbanwe Russia
Ntughari ochichi nke Russia
Ntughari Russia onye bu
Okwu okwu mgbanwe ndị Rọshịa - echiche
Russianse wordsearch - mmadu
Russianse wordsearch - ebe
Ekwu okwu okwu mgbanwe ndị Russia
Ntughari Russia bụ ihe omume dị egwu nke na-abụghị sọghari ụzọ Russia, ọ kpụkwara narị afọ 20 nke ụwa gburugburu ụwa.
N'oge uzo 20th, Russia bụ otu n'ime alaeze na mba kachasị ike n'ụwa. Mbara ala ya sitere na Europe ruo Eshia wee ruo otu ụzọ n'ụzọ isii nke ụwa. Onu ogugu Russia kariri nde mmadu 100, na otutu otutu agbụrụ na asusu. Usuu ndị agha ya nke na-anọchi anya oge ya bụ ndị kasị ibu n'ụwa.
N'agbanyeghị oke na ike ya buru ibu, ike Russia bụ oge ochie dịka ọ dị ugbu a. Ọ bụ naanị otu nwoke na-achị alaeze ndị Russia. Tsar Nicholas II, onye kwenyere na ikike ọchịchị ya bụ onyinye sitere na Chineke. Na 1905, ikike nke ọchịchị Tsar sitere na ya ndị na-eme mgbanwe na ndị nnupụisi na-achọ imepụta ọchịchị onye kwuo uche Russia n'oge a. Ọchịchị ochie ahụ lanahụrụ ihe ịma aka nke 1905 - mana echiche na ike ndị ọ nwatagoghị.
Agha Ụwa Mbụ rụrụ ọrụ dị ka onye na-akpata ngagharị iwe na Russia. Dị ka ndị nche ndị ọzọ ochie nke Europe, Russia meriri n'agha ọkụ na-eche n'echiche maka nsonaazụ ya. Site na 1917, agha ahụ emeela ka ọtụtụ nde ọnwụ, mebie akụ na ụba Russia ma belata nkwado ndị a ma ama maka tsar na ọchịchị ya.
Ewepụrụ Nicholas n'ọchịchị ma jiri gọọmentị nwa oge nọchie ya - mana usoro ọchịchị ọhụrụ a chere nsogbu aka ya anya, dịka nrụgide nke agha na-aga n'ihu na ịrị elu nke radical n'etiti ndị ọrụ. Ntughari nke ugboro abụọ na October 1917 nyefere Russia n'aka nke Bolsheviks, ndị na-elekọta mmadụ na-eduzi Vladimir Lenin.
Lenin na ndị Bolshevik kwalitere omume ọma Marxism ma kwe nkwa na ndi mmadu kachasi nma maka ndi oru ha. Ma hà nwere ike ịsọpụrụ ma mezuo nkwa ndị a? Lenin na ọchịchị ọhụrụ ya nwere ike imeziwanye ọnọdụ maka ndị ọrụ, ebe ha na-emeri mbibi nke agha ma na-adọkpụ Russia na ụwa nke oge a?
Ebe nrụọrụ weebụ mgbanwe nke Alpha History bụ akwụkwọ ọgụgụ zuru oke maka akwụkwọ maka ihe omume na Russia n'etiti 1905 na 1924. O nwere ihe kariri 400 isi mmalite na nke ozo di iche-iche, gunyere nkọwa zuru ezu nchịkọta edemede, akwụkwọ na eserese eserese. Ebe nrụọrụ weebụ anyị nwekwara ihe ederede maka map na maapụ echiche, nghazi, okuko, a 'onye bu onye'na ozi na akụkọ ihe mere eme na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme. Studentsmụ akwụkwọ nwekwara ike nwalee ihe ha maara ma cheta ọtụtụ ihe dị n'ịntanetị, gụnyere nyocha, ntụgharị okwu na okwu. Isi mmalite, edepụtara ihe niile dị na akụkọ Alfa site n’aka ndị nkuzi ruru eru ma nweekwa ahụmahụ, ndị ode akwụkwọ na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme.
Ewezuga isi mmalite, ọdịnaya niile dị na weebụsaịtị a bụ © Alfa History 2019. Enwere ike ghara idetu ọdịnaya a, bipigharia ma o bu kesaa ya ozo n’enwetaghi ikike nke Akụkọ Alfa. Maka ozi ndị ọzọ gbasara iji weebụsaịtị Alfa History na ọdịnaya, biko rụtụrụ aka na nke anyị Usoro ojiji.
Chọọ saịtị a:
Ònye bụ onye
Ajụjụ ndị edemede
Ndị ọkà mmụta
Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme
Agha Ụwa Mbụ
Oké Mgbukpọ ahụ
Ntughari nke China
Peculiar gara aga
Saịtị mgbanwe Russia a nwere akụkọ, isi mmalite na echiche banyere ihe ndị mere na Russia n'etiti 1891 na 1927. Emere saịtị a site na Alfa History. O nwere okwu 173,003 na ibe 276 ma emesiri emelitere ya na August 3rd 2019. Maka ozi ndị ọzọ, gaa na peeji nke FAQ ma ọ bụ Usoro Ojiji anyị.